IT ISAHLUKO 2: IBHILI LUPHONONONGO OLUKHULU LWETYALA LOKUSINDA - IBHILI YETYALA
UMthetho oYilwayo kwi-IT Isahluko 2 luVavanyo oluKhulu lweLungelo lokuSinda kwiXhoba
** Abonakalisi abancinci be IT Isahluko 2 . **
Umncinci uBill Denbrough uchithe uninzi lwee-2017 IT esokola nokusweleka komntakwabo, uGeorgie. Xa uGeorgie wacela uBill ukuba adlale naye, uBill wazenza ngathi uyagula kodwa wamenzela umntakwabo iphenyane ukuba lize libaleke emlanjeni ukuze onwabe kwaye avumele uBill ukuba ahlale ngaphakathi. Ngokwenza njalo, uGeorgie waba lixhoba lokuhlekisa ngokubulala uPennywise, kwaye ke, ukuthanda kukaBill ekuthatheni phantsi umhlekisi kwaqala.
Oko sikubona kuyo IT Isahluko 2 Kukukhula komzabalazo oqhubekayo weBill nelo tyala, into uPennywise ahlala eyisebenzisa ngokuchasene naye ukuze athabathe ilungu ngalinye leKlabhu yabalahlekileyo.
Kwi-movie yokuqala, iinguqulelo ezincinci zabalinganiswa bakholelwa ukuba bambulale uPennywise iDown Clown, bamtshabalalisa kwindawo yakhe yokuhlala bekhulula idolophu yaseDerry, Maine kumjikelo wesondlo se-monster. Qho emva kweminyaka engamashumi amabini anesixhenxe, uPennywise uyaphakama atye abantwana bakaDerry aze alale angalali de kufike ukutya kwakhe okulandelayo, IT Isahluko 2 , Iklabhu yabalahlekileyo iyaqonda ukuba ayikagqitywa okwangoku xa kuvela i-monster.
Yenziwe nguBill (McAvoy), Bev (Jessica Chastain), Eddie (James Ransone), Richie (Bill Hader), Mike (Isaiah Mustafa), Ben (Jay Ryan), and Stan (Andy Bean), iqela labahlobo liyazama ukuxhasa isivumelwano abasenzileyo ukuba babuye kwaye bayeke iPennywise kwakhona ukuba imizamo yabo yokuqala ayiphumelelanga.
asizizo izinto eziphambeneyo max
Ingxaki kukuba bakamshiya uDerry, amalungu amaninzi eqela alibale ngayo yonke into malunga noDerry kunye noko kwenzeka kubo apho, kwaye mhlawumbi, ngandlela thile, uBill wamlibala umntakwabo. Akukaze kucace ukuba umntu ngamnye olahlekileyo ukhumbule kangakanani, kodwa xa uBill ebuyela kwikhaya lakhe lobuntwana, yonke imvakalelo malunga noGeorgie ibuya kalishumi, kwaye ujongene nenkumbulo yokusinda xa umntakwabo omncinci engazange.
Ityala likaBill lisusela kwinto yokuba ukuba ebeye kudlala noGeorgie, umntakwabo ngekhe abulawe, nto leyo engalunganga, kuba umntwana kufuneka azi njani ukuba umntakwabo uza kutyiwa idemon ehlekisayo? Ewe kunjalo, loo nto yokubeka ityala endaweni engeyiyo yiyo yonke le nxalenye yokujonga kokuziva unetyala kwixhoba. Kwabaninzi, xa behlala kwaye umntu abamkhathaleleyo enganikezeli, kukho le ntiyo malunga nokusinda kwabo okuthatha indawo.
KuYilwayo, oku kubonakala ngendlela uPennywise anokuyisebenzisa kuye, ade aqonde ukuba akanatyala ngokufa kukaGeorgie. Rhoqo, eli tyala silibonayo lisetyenziswa njenge crutch, kwaye mhlawumbi kungenxa yokuba uBill kufuneka ayiphinde le ntlungu, kodwa kukho into entle ngendlela yokuba IT Isahluko 2 ivavanya isidingo sikaBill sokukhusela abantwana kwiPennywise.
Njengomntu omdala, uzabalazela ukugcina umntwana ohleli kwindlu yakhe yakudala. Ufuna ukubulala uPennywise, nokuba ungabhatala malini, kuba akafuni ukuba omnye umntu ahambe ngale nto ayenzileyo. Ngokuqinisekileyo, ngandlela thile, uyenzela uGeorgie, kodwa ndicinga ukuba uzenzela yena kwaye nasebuntwaneni waphulukana nabo ngenxa yecala ebengafanele ukuba nalo.
Okwangoku, uBill unyanzelekile ukuba ajonge eyakhe intiyo ebusweni (enkosi uPennywise namaqhinga akhe) kwaye aqonde ukuba ayinguye omele asolwe. Ukusinda kwakhe akusisiqalekiso. YayinguPennywise owenze le nto, kwaye nguPennywise ekufuneka enetyala ngayo yonke into eyenzekileyo kwidolophu yaseDerry.
Umxholo webali likaBill awunomdla kakhulu kwifilimu, kodwa kukujonga kakuhle ukuba ityala linokuyenza na emntwini. Ngokuqinisekileyo, sonke asinakho ukuba sijongane ngokoqobo nobuntu bethu bobuntwana, kodwa loo mbono yokujonga iimpazamo zethu kunye nokuqonda ukuba ezinye izinto zingaphandle kolawulo lwethu ngumyalezo omhle.
Indawo Yokudlala 2
Intombazana intombazana ye-lemon sandwich cookies
emva kwegumbi lokubulala abadlali
Unyoko nomzobo wam
umthi owonwabileyo abahlobo kwisikolo se-copyright sika-youtube